အဘယ်ကြောင့် Infographics ကိုအသုံးပြုရန်? | Martech Zone
သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 5, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
ဒီနေစဉ် infographic Infographics သည်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတည်းထက်အချက်အလက်များနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပိုမိုတိကျစွာမည်သို့ပေးပို့နိုင်ကြောင်း၏အရေးကြီးပုံကိုရှင်းပြပြီး၎င်းတို့သည်အလွန်ကြီးစွာသော infographic ၏အခြားရှုထောင့်များစွာကိုလက်လွတ်သွားကြသည်။
Infographics အလွယ်တကူဖြစ်ကြသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး... ကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသောအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို download နှင့် upload လုပ်ရန်စွမ်းရည်သည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါသည်။ အခြားသူတစ် ဦး ၏ပါဝင်မှုကိုလေးမြတ်ကြောင်းပြသရန်အတွက် blog post တစ်ခုရေးရန်ကြိုးစားခြင်းထက်ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။
infographics ဆှဲ အာရုံစူးစိုက်မှုတွေအများကြီး။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရုပ်ပုံများဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုအမြင်အာရုံဖော်ပြခြင်းသည်စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကျရှုံးသောလူများကိုဖမ်းလေ့ရှိသည်။ သူတို့ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊
ယခုလက်ရှိတွင် infographics သည်အနည်းငယ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည် ဂိမ်း ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် - အကယ်၍ သင်၏တစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်ပေးလျှင်၎င်းသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောသော့ချက်စာလုံးပါသောသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့လင့်ခ်တစ်ခုပြန်ထည့်ရန်သူတို့ကိုသာမန်အားဖြင့်သင်တောင်းဆိုလေ့ရှိသည်။ Voila … backlink! Backlink များသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရှိခြင်း၏ရွှေအဆင့်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခုလား infographic ပုံစံပုံစံဗီဒီယိုအသစ်များသည်ဝက်ဘ်ကိုရိုက်ခတ်နေသည်။ ၎င်းတို့သည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အသံနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ iMovie နှင့် Adobe After Effects ကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးစျေးလည်းကျလာသည်နှင့်အမျှများပြားလှသောအပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ဗွီဒီယိုများကိုကုမ္ပဏီများ ပို၍ များပြားလာလိမ့်မည်။